Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner 1.0.23 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.23 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner
Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဤသည် pedometer built-in sensor ကို သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းရေတွက်ရန်အသုံးပြုသည်။ အဘယ်သူမျှမ GPS စနစ် ခြေရာခံ, ဒါကြောင့်ကိုအလွန် ဘက်ထရီ ကယ်တင်နိုင်ပါ။ ဒါဟာအစအားလုံးဤအချက်အလက်ရှင်းလင်းစွာဂရပ်များတွင်ပြသပါလိမ့်မည်စသည်တို့ကိုသင့်ရဲ့ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်း, လမ်းလျှောက်အကွာအဝေးနှင့်အချိန်, ခြေရာခံ။
သငျသညျနေ့စဉ်ခြေလှမ်းပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆက်တိုက်2ရက်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. အဘို့သင့်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်တစ် Streak စတင်ပါလိမ့်မည်။ သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Streak စာရင်းဇယားလှုံ့ဆော်မှုနေဖို့ည့်ကျဇယားစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမ Lock ကိုအင်္ဂါရပ်များ
အားလုံးအင်္ဂါရပ်တွေကို 100% အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အပေးဆောင်စရာမလိုဘဲအားလုံး features တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျဆက်တိုက်2ရက်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. အဘို့သင့်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်အခါ Streak စတင်သည်။ အဆိုပါ Streak ဆက်လက်ပါစေရန်တက်ကြွသောထားပါ။
Start ကို, Pause နဲ့ Reset
သင်တို့သည်တန်ခိုးကိုကယ်ဖို့မည်သည့်အချိန်တွင်မခြေလှမ်းရေတွက်ခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ သင်ကခေတ္တရပ်တန့်ပြီးတခါဒီ app နောက်ခံ-လန်းဆန်းစာရင်းဇယားကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်ယနေ့အဖွင့်ခြေလှမ်းရေတွက် reset နှင့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပါ0င်ကနေခြေလှမ်းရေတွက်လို့ရပါတယ်။
သင်တန်း Mode ကို
သငျသညျညစာစားပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သော 30-မိနစ်လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းသကဲ့သို့သငျလိုခငျြတဲ့သီးခြားလမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်မရွေး, စတင်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်း mode မှာ, ငါတို့အကွာအဝေး, သီးခြားစီသင့်ရဲ့တက်ကြွအချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ function ကိုပေးနှင့်သင်၏လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ရေး၏ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ကြ၏။
ဒါဟာခြေလှမ်း tracker ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google က 2017 ကအနိုင်ဂိုးအသင်း၏အကောင်းဆုံး Play ကဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကြယ်ဒီဇိုင်းကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူစေသည်။
တိကျမှန်ကန်တဲ့ခြေလှမ်းတန်ပြန် & ခြေလှမ်းများ tracker ရှာဖွေနေပါသလား သင့်ရဲ့ pedometer လွန်းပါဝါကိုသုံးပါပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလှမ်းတန်ပြန် & ခြေလှမ်းများ tracker တွင်သင်သည်ရှာတှေ့နိုငျအရှိဆုံးတိကျမှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်လည်း pedometer ချွေတာတဲ့ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းတန်ပြန် & ခြေလှမ်းများ tracker တွင်ယခုရယူပါ!
ဆုံးရှုံးအလေးချိန် app ကိုရှာဖွေနေပါသလား အဘယ်သူမျှမကျေနပ်ကိုယ်အလေးချိန် app များကို? သင်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီရှာဖွေနိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးရှုံးအလေးချိန် App ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဤသည်ကိုဆုံးရှုံးအလေးချိန် app ကိုသာခြေလှမ်းများဒါပေမယ့်လည်းကောင်းတစ်ဦးအလေးချိန်အရှုံး app များကိုရေတွက်လို့ရပါတယ်။
App ကို Walking & Tracker Walking
အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းလျှောက် app ကို & လမ်းလျှောက် tracker! ဒါဟာလမ်းလျှောက် app ကို & လမ်းလျှောက် tracker, ဒါပေမယ့်လည်းလမ်းလျှောက်စီမံမသာပါပဲ။ ဒီလမ်းလျှောက်စီမံကြိုးစားပါ, ပိုကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရနှင့်လမ်းလျှောက်စီမံအတူမထိုက်မတန်စောင့်ရှောက်လော့။
Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner အား အခ်က္ျပပါ
killat စတိုး 2.76k 499.05k
Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.23
ထုတ်လုပ်သူ Simple Design Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://period-calendar.com/privacypolicy.html
Pedometer - Step Counter Free & Calorie Burner APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ